UNGAYITHENGA NJANI KWAYE UYITHENGE PHI I-USD EVULEKILEYO YEDOLA (I-USDO) -ISINYATHELO ESILULA NGESIKHOKELO SENYATHELO - UKUTHENGA I-CRYPTO
Ungayithenga njani kwaye uyithenge phi i-USD evulekileyo yeDola (i-USDO) -Isinyathelo esilula ngeSikhokelo seNyathelo
Inyathelo 5: Urhwebo lwe-USDO
Inyathelo lokugqibela: Gcina i-USDO ngokukhuselekileyo kwizipaji zehardware
Ezinye izixhobo eziluncedo kurhwebo lwe-USDO
I-USDO (i-USD evulekileyo yeDola) sisiseko esibambekayo esixhaswe yi-OpenDAO.
I-USDO ithatha ubambiswano oluninzi kunye nefilosofi ethe kratya kwi-DAI kwaye iyilinganisela ukuxhasa uluhlu olukhulayo lwezinto zombini ze-crypto kunye neeasethi zehlabathi zokwenyani ngendlela engenamvume
Ngelixa injongo ye-USDO ilula, i-ecosystem yayo ityebile kwaye inzulu. Abatyali banokuthatha inxaxheba kuwo onke amanqanaba obomi be-minting, ukusuka ekubambeni ii-asethi zabo ukuya kuthi ga kwifama yokuhlawula amatyala. Izicelo ezitsha ze-USDO zongezwa rhoqo.
Ixabiso langoku le-USDO yi- $ 1.00 kwaye ibekwe kwi-3693 kwi-Coinmarketcap kwaye kutsha nje inyuke nge-0.35 yepesenti ngexesha lokubhalwa.
I-USDO idweliswe kwinani lotshintshiselwano nge-crypto, ngokungafaniyo nezinye iimali eziphambili, ayinakuthengwa ngokuthe ngqo ngemali ye-fiats. Ungathenga ngokulula le ngqekembe ngokuthenga kuqala i-Bitcoin kuyo nayiphi na indawo yokutshintshiselana nge-fiat-to-crypto emva koko udlulisele kutshintshiselwano olunikezela ukuthengisa le ngqekembe, kweli nqaku lesikhokelo siza kukuhamba ngokweenkcukacha amanyathelo okuthenga i-USDO .
Uqikelelo lwamaxabiso etyathanga lobunzima
Kodwa asikenzi okwangoku. Sifuna ukuguqula i-BTC yethu ibe yi-USDO. Njengoko i-USDO okwangoku idweliswe kwiPancakeSwap siza kukukhokela ngendlela yokuguqula i-BTC yakho eqongeni. Ngokungafaniyo nolunye utshintsho lwendawo enye amanyathelo okuguqula aya kwahluka kancinci kwiPancakeSwap kuba lutshintsho olusemthethweni (i-DEX) engafuni ukuba ubhalise iakhawunti kwaye ungahambi kuyo nayiphi na inkqubo ye-KYC, nangona kunjalo, ukurhweba kwi-DEX kufuna ukuba ulawule Isitshixo sakho sangasese kwisipaji sakho se-altcoin kwaye kuyacetyiswa ukuba ukhathalele isitshixo sakho ngasese, kuba ukuba ulahle izitshixo zakho, oko kuthetha ukuba uyakulahlekelwa kukufikelela kwiingqekembe zakho ngonaphakade kwaye akukho nkxaso yabathengi iya kukunceda ufumane izinto zakho umva. Nangona ilawulwa ngokufanelekileyo kukhuselekile ngakumbi ukugcina iiasethi zakho kwisipaji sakho sangasese kunakwizipaji zotshintshiselwano. Ukuba awukonwabisi ukusebenzisa i-DEX okwangoku, jonga ukuba i-USDO iyafumaneka nakuluphi na olunye unaniselwano lwendawo yesiqhelo kwithebhu engentla. Ngaphandle koko masilandele la manyathelo ngononophelo.
charat () iJavacript
Ngamafutshane, njengoko i-USDO ingumqondiso we-BEP-20 osebenza kwi-Binance Smart Chain, indlela ekhawulezayo yokuyithenga kukudlulisela i-BTC yakho kwi-Binance (okanye iintengiselwano ezidweliswe kwitafile engezantsi kubarhwebi base-US), uyiguqulele kwi-BNB, emva koko yithumele kwisipaji sakho ngeBinance Smart Chain kwaye utshintshe i-BNB yakho ye-USDO kwiPancakeSwap.
Apha kuza elona candelo linzima lenkqubo, ngoku kufuneka wenze isipaji sakho ukuze ubambe zombini i-BNB kunye ne-USDO, kukho iindlela ezininzi onokuzenzela isipaji sakho, olona khetho lulungileyo kukusebenzisa isipaji sehardware, njengeLedger Nano S okanye ULedger Nano X. Zizixhobo ezikhuselekileyo ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhusela iiasethi zakho, kuya kufuneka ugcine amabinzana embewu kwindawo ekhuselekileyo kwaye ungaze uyibeke kwi-intanethi (okt sukufaka amabinzana embewu kuyo nayiphi na inkonzo / ilifu / imeyile, kwaye musa ukuyifota). Ukuba ucwangcisa ukuhlala kwindawo ye-crypto okwethutyana, kuyacetyiswa ukuba ufumane isipaji sehardware.
Cofa ungenise kwaye ulandele amanyathelo okuqinisekisa emva koko. Emva kokurhoxa ngempumelelo i-BNB yakho kufuneka ifike kungekudala kwisipaji sakho. Ngoku ulungele ukuthenga i-USDO ekugqibeleni!
Cofa kwi-Connect Wallet ukuba awukenzi oko. Ngaphandle koko uya kuba nakho ukubona ibhalansi yakho ye-BNB apha ebaleni, faka imali ongathanda ukuyitshintshisa nge-USDO kwaye emva koko uye ebaleni, khetha i-USDO ukusuka ekuhliseni, isixa esihambelanayo se-USDO kufuneka sivele kwangoko. Qinisekisa kwaye uqhubeke 'nokutshintsha'. Kwiskrini esilandelayo, qinisekisa ukuthengiselana kwakhona ngokunqakraza Qinisekisa ukutshintsha. Ngoku iMetaMask kufuneka ivele kwaye ikubuze ukuba uyafuna na ukuvumela iPancakeSwap ukuba ichithe i-BNB yakho, cofa uQinisekise. Lindela isiqinisekiso sekrini ide ibonise 'ukuThunyelwa okuThunyelweyo', ndiyavuyisana! Ekugqibeleni uthenge i-USDO !! Emva kwethutyana kufuneka ubenakho ukubona ibhalansi ye-USDO yakho kwi-MetaMask Wallet yakho.
Ngaphandle kokutshintshiselana (ngentla) ngasentla, kukho iitshintshiselwano ezimbalwa ezithandwayo ze-crypto apho zinemilinganiselo efanelekileyo yokuthengisa yemihla ngemihla kunye nesiseko esikhulu somsebenzisi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uza kukwazi ukuthengisa iingqekembe zakho nangaliphi na ixesha kwaye iifizi zihlala ziba sezantsi. Kuyacetyiswa ukuba ubhalise kolu tshintshiselwano ukusukela nje ukuba i-USDO idweliswe apho iya kutsala isixa esikhulu semali yokuthengisa evela kubasebenzisi phaya, oko kuthetha ukuba uya kuba namathuba amahle okurhweba!
Ukuba ucwangcisa ukugcina ('hodl' njengoko abanye besitsho, ngokusisiseko i-misspelt 'hold' ethe yaziwa ngokuhamba kwexesha) i-USDO yakho ixesha elide, unokufuna ukuphonononga iindlela zokuyigcina ikhuselekile, nangona iBinance yenye otshintshiselwano olukhuselekileyo lwe-imali yedatha apho kuye kwakho izehlo zokugenca kwaye iimali zalahleka. Ngenxa yobume beewallets ngokutshintshiselana, ziya kuhlala zikwi-Intanethi ('Iisipaji ezishushu' njengoko sizibiza njalo), ke ngoko ziveza imiba ethile yokuba sesichengeni. Eyona ndlela ikhuselekileyo yokugcina iingqekembe zakho ukuza kuthi ga ngoku ihlala ibeka kuhlobo 'lweeCold Wallets', apho isipaji sinokufikelela kuphela kwi-blockchain (okanye 'yiya kwi-Intanethi') xa uthumela imali, ukunciphisa amathuba izehlo zokubulala. Isipaji sephepha luhlobo lwesipaji esibandayo sasimahla, sisibini esenziwe ngaphandle kweintanethi kwidilesi yoluntu nakwabucala kwaye uya kuyibhala kwenye indawo, kwaye uyigcine ikhuselekile. Nangona kunjalo, ayomelele kwaye ichaphazeleka kwiingozi ezahlukeneyo.
Ixabiso ledeez yamandongomane
Ndingayithenga i-USDO ngemali?
Ngaba zikhona iindlela ezikhawulezayo zokuthenga i-USDO eYurophu?
Ngaba akhona amanye amaqonga okuthenga i-USDO okanye iBitcoin ngamakhadi etyala?
Akukho ndlela ethe ngqo yokuthenga i-USDO ngemali. Nangona kunjalo, ungasebenzisa iindawo zentengiso ezinje Iinkonzo zeNgingqi ukuthenga i-BTC kuqala, kwaye ugqibe onke amanye amanyathelo ngokudlulisela i-BTC yakho kutshintsho lweAltCoin.
Funda ngakumbi kwiziseko zeDola ezivulekileyo zeDola kunye nexabiso langoku apha.
I-iphone kwi & voicemail ayisebenzi
Ukuphunyezwa kwe-geckodriver kufuneka ibe sendleleni
uvavanyo oluzenzekelayo lomthombo ovulekileyo
Ngaba ukusebenzisa kugoogle kuyasabela
fxnetworks.com/activate kwaye ufake ikhowudi engezantsi
uqhagamshela njani i-hp deskjet 2622 kwi-wifi